Erotique Massage - RUBPAGE // Muviri Rubha / NuRu Eotic Massage
Kunyangwe iwe urikutsvaga kumutsa hunhu hwako kana ruzivo rwehuwandu hwekufara uye kusagadzikana kwemufaro, isu tiri pano kuzokupa yakanakisa erotic massage service. Edza kukwiza erotic kamwechete, uye iwe unzwisise zvazvinoreva zvinofadza kune hutano hwevarume vako, uye unodzoka wadzokororazve. Masseuse edu ane hunyanzvi, anokwanisa uye anokatyamadza akagadzirira kufadza kunyangwe mutengi anonyanya kudzvinyirira.SERVICE.Iwe unogona kushanyira masseuse edu kwatiri kushaya masero saloni kana kuronga kushanya kunodakadza kuhotera yako kana pekugara wega. Chero ipi sarudzo yaungasarudza, isu tinovimbisa isina kufananidzwa erootic massage chiitiko.
Ese maMasseuse edu akasarudzika zvakasarudzika tarenda ravo, hunyanzvi, runako rwechisikigo uye vese vakakomborerwa nechitarisiko chinofadza zvinoyemurika uye nehunhu hwepamoyo.
MASSAGE PROGRAMU - EROTIC MASSAGE
Erotic massage inzira huru yekuwana simba repabonde, zororo, pamwe nekunakidzwa uye kushuva. Ipo uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchikwinyiswa, iwe unenge uchizenge uchitumira iwe kune imwe nyika yekunakidzwa nekubata kwakanaka kubva kumasseuse yako pamuviri wako.
MUVIRI WEMuviri BASA MASASI
Iyo Muviri-kune-muviri massage maitiro anotanga kubva kuThailand; zvekunze, zvisinganzwisisike uye zvinogara zvichinakidza, zvinounza murume wese mufaro wechokwadi uye kupenya uye kwakasimba kuzorora.
Kukwiza muviri nemuviri haisiri ropafadzo yevanhurume, edu masseuse anogona kuunza mufaro uyu kunyangwe kuvakadzi, kunyanya chero nzira iyi ichiwanzoshandiswa muThailand uye kwete taboo.
Tantra iri pamusoro pekuzorora kwemuviri nemweya, uye nezve kushandiswa kwekuziva kwesimba pabonde.
Iyo inokuratidza iwe, kuti kunakidzwa haisi taboo. Vazhinji vanhu vanoona bonde sekudya kwemanheru kana chikafu chinokurumidza - zvese zvinofanirwa kukurumidza uye nekukasira, uye vanobatsirana kugadzirisa izvi nekureba kwenguva yakareba sei uye kuti mangani maficha avachachinja munguva pfupi.
01.zvinodikanwa izvi kurapwa kweVakuru, saka unofanirwa kuti ungangoita makore gumi nemasere kana kupfuura kuti ubhuke massage yedu. Kuti uite musangano, unogona kutaura paindaneti kana kutumira email. 18.HOTEL MASSAGEWe tinopawo erotic massage muhotera yako.
Mitengo yedu inosanganisira kufamba, saka hakuzove nekushamisika kana iwe uchibhadhara. Iyi sevhisi inongowanikwa chete kumahotera muguta reParis.03. Kudomwa masevhisi edu anopiwa ari ega uye akasarudzika
uye isu tinobata kushanya kwese nehungwaru.
Isu tinowanikwa kwekugadzwa kubva ku:
10.00 - 01, Mon-Zuva.
Mune edu ese erotic mameseji zvirongwa, isu tinoshanda pamatanho mazhinji. Kushanda pamhasuru kuburitsa kunetsekana kubva mumuviri kuti uite kuti unzwe kugadzikana nemasaiseuse ako, kuti utange iyo yakashata mamiriro. Kunakidzwa uye ruzivo rwemuviri kuburikidza nekubata zvakapfava uye zvakapfava, kusimba kunokura uye kunofambira mberi kusvika padanho renzvimbo dzinotyisa kuburikidza nematanho akasiyana ekusimudzira muviri uye genital reflexology.
Neiyi massage, iwe uchawedzera ruzivo rwako nezve zvebonde uye nekukudziridza hunyanzvi hwekuona uye kusimudzira panyama uye pamweya Tinogona zvakare kugadzira anoshamisa uye ehupenyu hwechiitiko mukati mega mega imba yako yehotera kana imba kana uchida.
Muviri kune kukwiza muviri kunoitwa nekushama kwakazara kana g-tambo yemasseuse ine mafuta anopisa anodonhedza muviri wake.
Kubva ipapo zvichienda mberi, iwe wakashambidzwa nemweya wekusvirana uyo unobvumidza hukama hwepedyo pakati penyu mese. Iyi pfungwa yekushambadza inosanganisira akasiyana maficha uye matekinoroji ekusimbisa umo miviri yevaviri vaviri haina kupfeka uye iri padhuze nekubatana.
Naizvozvo, kukwizwa muviri nemuviri ndiko kunonyanya kuita zvebonde, kunakidza, uye kunobatsira kwete kwauri chete asiwo kune vemasseuse panguva imwe chete. Mhedzisiro yacho chiitiko chisingakanganwiki panyama uye nemaziso
Munguva yeTantra masaja, iwe unozonzwa kushamwaridzana kunoshamisira kwemhando yepamusoro yemukadzi muviri. Musikana achamutsa pfungwa dzako nekubata zvishoma kwezamu rake rakashama, chiuno, dumbu, magaro. Sero rega rega remuviri wako richaunzwa rakaenzana, sechikamu chekukwiza muviri kunoitwa nemagokora nemabvi kusvika panhongonya yekuzorora. Iyo tantra massage yakafanana nerwendo mukati mako, kuburikidza neyako yese yemukati muchadenga. Pese parwendo irworwo, iko kubata kune rudo kuchabatsira iwe kubatana nezvikamu uye nezvenyaya yako, izvo zvinowanzo sanyanya kutariswa. Iwe unozosangana nekugona kwako kuzere, hunhu hwako, hunhu, kunakidzwa, uye kugona kwako kufara!
Kuti unakidzwe nenyaradzo yehotera yako kamuri, isu tinopa yedu hotera masaji sevhisi. Mumwe wemasseuse edu achasangana newe ipapo kuti unakirwe nekukwidziridzwa kwepanyama pasina kushanyira yedu salon salon.
Mitengo yedu inosanganisira kufamba, saka hakuzove nekushamisika kana iwe uchibhadhara. Iyi sevhisi inongowanikwa chete kumahotera ari pakati peguta.
Nezvinangwa zvekuchengetedza, kana uchigara kuhotera, runhare rwekuremekedza runoitwa pazuva rekubhuka wakanangana nekamuri yako yehotera.
Izvi zvinoitirwa kuona kugadzwa kuri kuenderera mberi sekurongwa uye sekusimbiswa kwenzvimbo yemusangano.
Zvakajairika kuti isu titeedzere maitiro ehunyanzvi, ayo anova nechokwadi chekuchengetedza kwevose mapato anobatanidzwa.
Maminitsi makumi matanhatu - 60 EURO200 mins - 90 EURO250 mins - 120 EURO
Maminitsi makumi matanhatu - 60 EURO250 mins - 90 EURO300 mins - 120 EURO